février | 2009 | Zouboon
MBA VONJEO FA LANY VATSY
Filed under: Uncategorized — zouboon @ 7:30
Efa ho roa tokom-bolana izay i Seheno sy i Jean-Marc no nilaozan-dreniny nandeha any Antananarivo, raha nandeha nitsabo ny reniny izay tsy salama any an-toerana izy. Ngidin’ny fianana anefa, lany vatsy izy mianadahy kely amin’izao fotoana izao. Mangataka izay mba foin’olona ho azy mianadahy amin’ireo olom-pantatra no hany hery. 17 taona i Jean-Marc zoky lahy matoa, ary 13 kosa i Seheno zandriny vavy. Mbola samy mpianatra daholo izy roa mianadahy ireto ary ny ray niteraka azy ireo kosa dia efa ela no nodimandry. Kamboty ray izany i Seheno sy Jean-Marc, ary tsy mbola nanambady mihitsy ny reniny taty aoriana. Eny amin’ny fonkotanin’i Manga izy ireo no monina, ary tsy misy raha tsy izy roa mianadahy ireto ihany no ao an-trano amin’izao fotoana izao. Raha araky ny fitantaran’i Seheno, izay niresaka nivantana taminay, dia nanazava mazava tsara izy fa sahirankirana ihany ny izy ireo amin’ny andavanandro na dia eo aza ny reniny.
Vola Ar 20 000 no navelan-dreniny ho azy mianadahy talohan’ny handeha izy, tamin’izay nilaza izy fa afaka herinandro monja dia hiverina. Indrisy anefa, satria nihanihombo ny aretina izay antony nandehanana tany andrenivohitr’Antananarivo, dia voatery nijanona tany ramatoa. Sahirana mafy izy mianadahy ankehitriny, ny renin’izy ireo koa mazava ho azy vaky loha amin’ny fiasan-tsaina amin’izy roa mianadahy kely tavela aty. Misy fotoana mantsy miantso an-janany ihany ramatoa manontany vaovao. Raha ny vaovao farany hazo araky ny nambaran’i Seheno ihany, dia nilaza izy fa: “amin’ny alarobia izao no ho tonga i mama”, sady feno hafalina no feno fanantenana ery izy nilaza izany. Mandra-pahatonga izay aloha dia atao tsara fatotra ny fehikibo.
savain’ny vadiny amin’ny tànany ny mahavevaviny
Filed under: Uncategorized — zouboon @ 1:42
Antony mahatonga fisarahana amin’ny mpivady matetika ny hasarotam-piaro be loatra na avy amin’ny lahy izany na amin’ny vavy, io indrindra no nandrava ny fanambadian’I Perline mivady.
Enina taona no nifanambadian’I Perline sy i Gervé mivady ary manajanaka lahy enina taona izy roa. Mpitari-posy no asan-drangahy, ary mbola tsy vita fomba ihany koa izy roa ireto. Ankehitriny, mamelon-tena irery amin’ny sasalamba I Perline mianaka, fa ilay rangahy kosa mipetraka toerana hafa. Vokatry ny hasarotam-piaron’ilay ralehilahy no anton’ny fisarahana, satria dia farahiany amin’izao olona rehetra izao I Perline vadiny. Efa nifindra trano imbetsaka izy ireo noho io antony ihany. “roasin’ilay tompon-trano foana izahay satria dia heveriny fa sipako avy ny manodidina rehetra”, hoy Perline mitantara. Mazàna dia tsikiloviny avy lavitra izay ataon’ny vadiny raha mandeha mivarotra fandrehetan’afo eny an-tsenan’ny Tsaramandroso iny ilay ramatoa vadininy. Misy ihany koa fotoana iafenany ao ambany fandriana nefa dia samy matory iray trano ao izy mivady. Fanaon’ity rangahy ity koa ny matory eo ambaravaran-tranony, miandry izay olona mety ho ampidirin’ilay ramatoa ao an-trano. Ny zavatra tena mahatsiravina aza dia sakainy amin’ny tanany ny mahavehivavy ity vadiny rehefa tonga ao an-trano izy. “isaky ny mody ao an-trano izy, rehefa rava miasa iny isanandro, dia atsofony any amin’ny mahavehivaviko foana ny fanondro adalany, dia avy eo dia karominy” manazava ilay ramatoa, “ raha mandomando ny tanany avy any, dia lazainy fa avy natory tamina lehilahy hafa aho, dia tahak’izay foana isan’andro” hoy ihany Perline nanohy.
Roa taona izao no nisarahan’izy mivady ireto tao aorian’ny nandosiran’ilay rangahy niaraka tamin’ny entana lafo vidy tao an-trano. Tsy niantoka na ny ny ariary ny mikasika ilay zanany intsony izy raha tsy taty aorianan’ny nametrahan’I Perline vadiny fitorina tany amin’ny CDE ( collectif de droits des enfants ), “hatramin’izay dia mbola tsy nanome vola anay mianaka mihitsy izy raha tsy ny saram-pianaran-janany roavolana farany nifandimby teo no mba niantohany” mitantara hatrany I Perline. Ar 7 000 ny isam-bolana ny saram-pianaran’ilay zaza. Omaly araky ny fifanarahan’izy mivady sy ny tompon’andraikitra ao amin’ny CDE, dia nanome fanampiana an’izy mianaka indray I Gervé.
Tsy vitsy raha mbola eto Mahajanga no moana toe-javatra tahaka izao, ary mbola misy koa aza ireo tena tsy manana itodihana mihitsy, fa dia mizaka ny mafy hatrany. Misy farany ihany anefa ny zava-drehetra.
MILAMIN-DRATSY I MAHAJANGA
Filed under: Uncategorized — zouboon @ 9:17
Efa tsy misy intsony aloha ny korontana eto Mahajanga tao aorian’ny Atalata 27 ny volana Janoary lasa teo. Na dia izany aza anefa dia tsy midika izany fa “lasa ny loza” saingy mbola miaina ao anatin’ny fitaintainana hatrany ny vahoaka. Na dia tsy misy intsony aza filaharana andalam-be sy fandrobana toy ny teo aloha vao tsy ela akory izay dia mbola hita amin’ny fomba fiainan’ny olona ihany ny fitaintaina sy ny tsy fitoniana tanteraka. Mifaritra eny amin’ny endriky ny vahoaka hatramin’izao ny fahatsapana fa mbola tsy ao anatin’ny fandriampahalemana tanteraka isika. Na ny mandefa ireo ankizy any an-tsekoly aza toa mbola mampitaitaina ny ray aman-dreny maro. Ramatoa Vero na I maman’I Dada araky ny fahalalan’ny maro azy dia milaza mazava tsara hoe “raha vao taratara ny fidiran’ny ankizy mody avy ampianarana dia efa miasa ny lohako sao ka nisy zavatra najoa azy indray sanatria”, ary maro ny ray aman-dreny no mitovy fiherana amin’ity renim-pianakaviana iray ity.
Ny hariva kosa indray na dia misy aza ny fanaraha-maso sy fiambenana amin’ny alina eny amin’ny fonkotany dia mbola atahorana ihany ny mety hitrangan’ny korontana. Raha tsiahivina kely anefa dia tanàna iray nalaza amin’ny fandriampahalemana raha I Mahajanga. Io antony io no mampirehareha an’I Mahajanga raha vao tsy ela akory izay. Ankehitriny anefa toa niova ny rasa. Ny irarian’ny rehetra dia ny mba iverenan’izany fandriamphalemana izany indra. Miankina tanteraka amin’ny isam-batan’olona izay monina sy mipetraka eto amintsika anefa izany filaminana izany.
HITODIDOHA HO AIZA INDRAY ARY I GASIKARA
Filed under: Uncategorized — zouboon @ 8:47
Tsy afa miala amin’izay lafin-javatra iray izay ny votoanton-dresak na dia satry aza izany, satria izany indray izao no itodihan’ny mason’ny vahoaka Malagasy rehetra: na olon-tsotra izany fa indrindra ireo mpanao pôlitika. Efa iaraha-mahita fa tsy ampahafantarina intsony tsy akory ny korontana izay mitranga eto amin’ny firenentsika amin’izao fotoana izao sy ireo zava-misy maro samihafa koa vokatr’izany. Hatreto aloha, dia samy manana ny fomba fijeriny ny rehetra ka tsy hita izay tena omen-tsiny fa mahasadaikatra ny hilaza izany. Ny vahoaka rahateo mbola samy eo ampiandrasana izay tena iafaran’ity raharaha manga ity.
Hanao ahoana indray isika avy eo?
Ity indray mantsy izao no tena olana mipetraka ary izany no tena mahavaky ny lohan’ny maro. Ny zavatra fantara aloha, raha ny zavatra niainana hatramin’izay teto amin’ny firenena no atao kajikajy, dia tsikaritra sy fantatra fa isaky ny ao aorian’ny korontana iray mitranaga eto amintsika, dia mitombo sy mihamahantra hatrany ny firenena Malagasy.
Raha hiverina taona vitsivitsy izao isika, nanomboka ny taona 1972 tamin’ny nisian’ny koroantana, dia efa nihanahanatra ny Malagasy tao aorian’iny. Taona vitsivitsy taty aoriana indray, izany hoe ny taona 1991, dia nitohy hatrany izany fihemorana izany. Tonga indray ny taona 2002 dia mbola izay ihany no zava-nitranga. Dia izao indray isika tojo ny taona 2009 izao, vokatry ny ady eo amin’ny fitondrana dia milentika hatrany hatrany isika makany amin’ny fahatrana, nefa dia ny mifanohitra amin’izay indrindra no mba tanjona iadiana. Mitotogana hatrany hatrany izany ny firenentsika. Porofony, efa mitombo sahady ny vidim-piainana eto amintsika amin’izao vanim-potoana iainantsiak izao, raha tsy hilaza hafa tsy ireo vidin-tsakafo fotsiny. Ny fahasimbana sy fanenjehana no betsaka ka tsy mahagaga raha toa ka mihavery hatrany isika.
Ny zavatra tsara ho fantatry ny maro dia ity: tsarovy fa ireo izay mety ho olona antony mampisysy niteraka ny korontana dia tsy hanahy akory izay vody andro merika, saingy isika valala tsy mandady harona aty ambany, no hitrongy vao homana raha ao aoriana kely ao.